China ms nyere kabhoni simbi machubhu Kupisa yakakungurutswa kabhoni simbi hombe uye diki dhayamita musono simbi pombi mugadziri gwapa fekitari uye vagadziri |Jute
ms pombi kabhoni simbi machubhu Kupisa yakakungurutswa kabhoni simbi hombe uye diki dhayamita musono simbi pombi mugadziri nzvimbo
Kambani yeShandong Jute Steel Pipe yakavambwa muna 2001, ikozvino, Takashongedzerwa nemichina yemhando yepamusoro yekugadzira, senge tambo yekuchinjisa inopisa, mitsara yekubaya, mitsetse yekugadzira yakatsetseka uye mitsara yekugadzira inotonhora. .Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira zvakajairika musono simbi mapaipi, yakanaka kudhonza mapaipi, yakanaka akakungurutswa pombi, alloy simbi pombi, yakakosha pombi, sheet simbi,Simbi pombi yakadzika kugadzirisa, nezvimwewo.Kambani yedu inokoka boka reakanakisa tekinoroji nyanzvi uye manejimendi evashandi vepamba simbi pombi indasitiri kuvandudza tekinoroji yezvigadzirwa zvedu.
Kambani iyi yakavakirwa pakutengeswa kwepombi dzesimbi dzisina musono dzinogadzirwa nekambani, uye zvakare inoshanda semumiririri wemapombi akasiyana-siyana asina musono emakambani makuru esimbi epamba akaita seBaosteel, Tiangang, Hengyang Hualing, Baotou Steel, Chengdu, nezvimwewo. iri 6-824mm uye ukobvu hwemadziro i1-120mm, huwandu hunopfuura 5000 hutsananguro hwemapombi ezvimiro, pombi dzemvura, yakaderera uye yepakati pressure boiler pombi, pombi dzakasimba, petroleum inopwanya pombi uye akasiyana mapipe esimbi alloy, uye anogovera maprofiles nemaplate. inogadzirwa nemidziyo mikuru yemumba simbi.Iyo kambani ine 20,000square metres.lts storage base inochengetedza uwandu hwematani 25,000 mukati megore.Yakazara yakatarwa, yakanakira uye nekukurumidza kurodha.
Mugadziri & Exporter
Common seamless simbi pombi;kutonhora-kudhonza mapaipi;pombi dzinotonhora;alloy simbi pombi;chaiwo maumbirwo mapaipi
0086-18865211873 & Ndokumbira unditumire email.
0.15inch kusvika 24.8inch
0.039inch kusvika 5.12inch
maererano nezvinodiwa nemutengi
T / T kana L / C pakuona
3) Shandisa Nzvimbo
Chimiro, Yekufambisa gasi nemafuta, kugadzira muchina chikamu uye zvichingodaro
4) Delivery nguva
15-35days sechikumbiro chako
GB5310-1995 (seamless simbi machubhu kune yakakwira pressure boilers).Inonyanya kushandiswa kune yakanyanya tembiricha uye yakanyanya kumanikidza kufambisa misoro yemvura uye mapaipi pamaboilers ezvidyarwa zvemagetsi uye zvidyarwa zvemagetsi enyukireya.Zvishandiso zvinomiririra 20g, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, nezvimwe.
Gb5312-1999 (kabhoni simbi uye kabhoni manganese simbi isina musono machubhu ezvikepe).Iyo inonyanya kushandiswa kukirasi I uye II kumanikidza mapaipi emvura boilers uye superheaters.Mumiririri zvinhu 360, 410 uye 460 simbi mamakisi.
Gb1479-2000 (isina musono pombi yesimbi yekumanikidza yakakwira makemikari fetiraiza midziyo).Inonyanya kushandiswa kufambisa tembiricha yakanyanya uye yakanyanya kudzvanywa pombi yemvura pamichina yefetereza yemakemikari.Zvishandiso zvinomiririra 20, 16Mn, 12CrMo, 12cr2mo, nezvimwe.
GB9948-1988 (isina musono pombi yepetroleum inoputika).Inonyanya kushandiswa kumaboilers, zvinopisa zvinopisa uye mapaipi ekufambisa mvura mupetroleum smelters.Zvishandiso zvinomiririra ndezve 20, 12CrMo, 1Cr5Mo, 1cr19ni11nb, nezvimwe.
GB18248-2000 (seamless simbi pombi nokuda gasi humburumbira).Inonyanya kushandiswa kugadzira akasiyana gasi uye hydraulic cylinders.Zvishandiso zvinomiririra 37Mn, 34Mn2V, 35CrMo, nezvimwe.
GB / t17396-1998 (inopisa yakakungurutswa isina musono pombi ye hydraulic prop).Inonyanya kushandiswa kugadzira marasha mugodhi hydraulic rutsigiro, silinda uye koramu, pamwe nemamwe hydraulic silinda nemakoramu.Zvishandiso zvinomiririra 20, 45, 27SiMn, nezvimwe.
Zvakapfuura: JIS STS42 G3455 ms pombi kabhoni simbi machubhu mutengo runyorwa
Zvinotevera: Hollow chikamu kabhoni isina musono simbi pombi Simbi+Pipes Mugadziri
GB/T 45#ms nyere kabhoni simbi machubhu Simbi+Mapaipi ...